ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုဘာကြောင့်စွန့်လွှတ်ရမှာလဲ - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ကသင့် ဦး နှောက်
ဘယ်လိုပြီးတော့အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Up ကို Give ရန်
ဤ blog တွင်ကြည့်ပါ: ဘယ်လိုပြီးတော့အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Up ကို Give ရန်
ယခင်ပို့စ်မှာတော့ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ယနေ့လူငယ်များအတွက်မကောင်းသောအရာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုဘာသာရေးအယူအဆများကတားဆီးပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အကြံပြုခဲ့သည်။ ငါကရိုက်တာမပါဘဲရက်ပေါင်း 50 ပေါင်းသွားပြီ, နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ, ကောင်းစွာ ... လုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သင်အားကောင်းသောဂိမ်းသို့မဟုတ်အခြားဆယ်ပေါင်ကြွက်သားများကဲ့သို့အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသည်။ သငျသညျ shemale porn မှလမ်းလွဲ, ဒါမှမဟုတ်ပို။ ပို။ ပို။ ပို။ ပို။ ပို။ စွဲလမ်း porn မှအရှုံးမပေးသောသူတို့အား spineless turds တစ် ဦး ဖြစ်လိုပါသလား? အမှတ်ထို့နောက်ပစ္စည်းပစ္စယတက်ပေးပါ။ အကျိုးကျေးဇူးများပါဝင်သည်:
1: တိုးမြှင့်လိင် drive တခုဖြစ်တယ်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည်သင်၏ testosterone ဟော်မုန်းတိုးပွါးကြောင်းဒဏ္ဍာရီဖြစ်ရှိပုံရသည်။ ကြောင်း shit fuck ဆိုတဲ့။ ငါ hornier ပိုပြီးရန်လိုခဲ့ဖူးပါဘူး။ တစ် ketogenic အစားအသောက်များတွင်နဲ့ပေါင်းစပ်ရုတ်သိမ်းရေး, ဖြည့်စွက်, သင်နဂါးအချို့ကိုမျိုးပါပဲ။ ဤသည်မှဦးဆောင် ...
2: အမျိုးသမီးများနေ့ကျိန်းသေသင်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုကိုရှာပါ။ ဘဝမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ငါချဉ်းကပ်အမျိုးသမီးတွေခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ခွင့်ပြု, သူတို့ထဲကတအကြံပေးအဖွဲ့ထိပ်တန်းဝတ်ထားတဆယ်လေးနှစ်လွန်ဟောင်းခဲ့ပေမယ့်ပင်ဒါ, ဒီတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများကလည်းငါ့ကိုမှာပိုပြီးပြုံး ioi ရဲ့, ဒါမှမဟုတ်ငါ့အဝနျးကငျြသို့၎င်းတို့၏လမ်းတွန်းဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်နေကြသည်။ ငါကဒီမှာသွားအချို့သော pheromones အရာရှိလြှငျသေချာပေါက်မသေချာဘူး, ဒါမှမဟုတ်အစဉ်အမြဲငါပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအချက်ပြမှုများကိုသတိပွုမိတယ်, သို့မဟုတ်ပါကယ့်ကိုပင်လျှင်သင် dickless အံ့ဘွယ်သောအမှုတစည်းဝိုင်းရံနေသောကွောငျ့သငျတို့သညျထာဝရဘုရား၏ fuck ဆိုတဲ့နေလျှင် နှိုင်းယှဉ်လျှင် Bryon, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာကျိန်းသေပါပဲ။
3: ဇောက်ချသောစကားသံ။ ဒီရက်ကျနော် Barry White က, ငါသည် sexy fuck ဆိုတဲ့သားရဲတကောင်ကဲ့သို့မြည်။
4: ပိုမိုလှုံ့ဆျောမှု။ သငျသညျအပြည့်အဝတစ်တိုင်ကီရရှိပါသည်အခါသင်၏စေ့ဆော်တကယ်က၎င်း၏ Zenith မှာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ရေးဖို့ရန်မက်လုံးပေးရှိသေး၏။ သငျသညျ shitty ဂိမ်းတွေကကကစားန်းကျင်ထိုင်ချင်ကြဘူး။ သငျသညျအထဲကအဲဒီမှာသွားချင်, သငျသညျဖွစျစနေိုကိုအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့နှားခြေးမွငျးခြေးမှုတ်ပြီးနောက်, Shit လုပ်ဖို့လိုလားတဲ့သူ, ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အမြင်တစ်ခုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အချက်အနေဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောသဘာဝကျပါတယ်?
5: သာ. ကောင်း၏လိင်။ မွှေး lassie ရဲ့ tits အပေါ်ပေါက်ကွဲထက်ပိုပြီးကျေနပ်စရာဘာမှရှိပါသလား?
6: သာ. ကောင်း၏အိပ်ပျော်ခြင်း။ ကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းဟာအားကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အုတ်မြစ်တဦးနှင့်စိတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမ brainer တကယ်ပါ။
7: သင်အချိန်သိမ်းဆည်းပါ။ က spanking သောအခြိနျကာလကိုယခုပြန်အနိုင်ရနေသည်။ သင်အလိုရှိသမျှငရဲ, ငှက်များထ chat, စာအုပ်တွေဖတ်ပါ။
8: အိပ်မက်များ။ သငျသညျတဖနျစိုစွတ်သောအိပ်မက်အရပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့ကိုနှောင့်အယှက်မပါဘူးဆိုရင်သို့သော်သင်စက်ဘီးစီးရှိရာရောင်စုံ, Lucid စိတ်အိပ်မက်တွေပျော်မွေ့ခြင်းနှင့် ... ဒါဟာ fuck ဆိုတဲ့ပေလိမ့်မည်။
9: သင်ပိုကြည့်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ငါ့အရေထွန်းလင်းဖြစ်ပါသည်, မကျြစိအောကျအနက်ရောင်အရိပ်ဝင်ကြပြီ။ အခုတော့တဦးတည်းကျိန်းသေပင်ဒါပိုကောင်းအိပ်ပျော်ခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဤ attribute, ဒါပေမယ့်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်မယ်ကြသောသူတို့ယောက်ျားတွေအဘို့ငါတောင်မှသူတို့ရဲ့ဆံပင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်ပြီးနောက်တက်ထူဆိုပါတယ်သူတွေကိုအနည်းငယ်အကောင့်ကိုဖြတ်ပြီးလဲပါတယ်။ Fuark ။
10: ကူခြင်းအထုပ်။ သင်ပြုပါသိဂရုမစိုက်!
11: ပြင်းထန်သောအားကစားရုံလေ့ကျင့်ခန်း။ Pent up, အငှားမရှိခြင်း, သင်သွားမယ့်ဆိုလိုသည် တိုက်ခိုက် ဒီအလေး။ ငါသည်ငါ့ခုံတန်းလျားစာနယ်ဇင်းကုန်းပြင်မှချိုးဖျက်, ငါက porn ကိုမကြည့်ဖို့ကြောင့်ဂုဏ်ပြု။
သငျသညျ (ငါဒီကနေအကျိုးအမြတ်ကြသူလူများအကောင့် post လိမ့်မယ်) သေးကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ငါအရှုံးမပေးမဟုတ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်အချို့သောအကြံပေးချက်များထွက်စာရင်းပြုစုမယ်။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံး:
1: ဒီလုပ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲအရာဖြစ်၏။ သငျသညျ dopamine, ဦးနှောက် circuitry နှင့် prefrontal cortex နှင့်အတူန်းကျင် fucking ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်ကြီးမားသော shit ။ ဒီဖွင့်ပေးကြဖို့အခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိ
2: သင်တက် fuck ဆိုတဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါကြောင့်, သင်ဆိုးမခံစားရသင့်တယ်။ ပျက်ကွက်မှုအတွက်မကောင်းတဲ့ခံစားရသူတွေကို, အချိန်ပေါ်သွားသည်အဖြစ် ပို. ပို. သည့်လှည်းကိုချွတ်ကျသွားတက်အဆုံးသတ်ကြောင်းပြသရာမှထွက်ရှိအနည်းငယ်လေ့လာမှုများရှိပါသည်။ ရုံကပယ် shrug နှင့်ပေါ်ရွှေ့။
1: သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် K9 Install လုပ်ပါ။ စကားဝှက်ကိုသင်မှတ်မိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေတစ်ခုခုလုပ်ပါ။ အဆိုပါအားနည်းချက်ကတော့သင်အလွယ်တကူပြုလုပ် uninstall နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ဒါပေမယ့်, အချိန်ကြာကြောင်း, သင်အဲဒီလိုအချိန်ကိုအသုံးပြုပုံကိုသင်တော်တော်လေးသူကပြောတယ်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့အာရုံမှလာပါလိမ့်မယ်။
2: သင်လက်ပ်တော့ရှိပါကလူတွေဆိုယခုအချိန်တွင်၌ကျင်လည်နိုင်ပါတယ်နေရာအတွက်သုံးပါ။ သိသာထင်ရှားတဲ့, သင်သည်သင်၏မိခင်ကိုသင်လုပ်ရပ်လုပ်နေတာပေါ်၌စင်္ကြံသွားချင်ကြဘူး ...
3: သင်နံနက်ယံ၌ထနိုးလာတဲ့အခါချက်ချင်းတက်ရ။ သငျသညျနံနက်သစ်သားရှိပါက, ထို့နောက်အိပ်ရာထဲကငရဲရ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင် Edge လိမ့်မယ်, နှင့် fuckupery တက်တတ်၏။ အအေးမိရေချိုးခန်းသို့သင့်ရဲ့မြည်းကို Get နှင့်အလုပ်ရ။
4: မဆို wanking ပစ္စည်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ Get ။ တစ်ရှူး, မဂ္ဂဇင်း, ချောဆီကိုတစ် Sears catalog မဂ္ဂဇင်းအဖြစ်ဗလာပင်တစ်စုံတစ်ခုသင့်ရဲ့ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သကျသပွေနိုင်ပါတယ် wanking တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ Get ။
5: fuck ဆိုတဲ့ likes တစ် lassie ပါ။ သငျသညျညှစ်လွန်းလျှင်, သင်သည်လမ်းမှလျော့နည်းဖွယ်ရှိသည်။
6: အရစ်ကျနဲ့မဂ္ဂနီဆီယမ်ကရေနံကိုသုံးပါ။ မဂ္ဂနီစီယမ်ရေနံသည်သင့် ဦး နှောက်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်စွမ်းအားရှိခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤအရာသည်ပိုမိုအားကောင်းလေသွေးဆောင်မှုကိုသင်လျော့ချနိုင်လေဖြစ်သည်။
၇။ ကျန်းမာပါစေ၊ အရက်မသောက်ပါနှင့်။ ဘယ်နှစ်ယောက် fuck ဆိုတဲ့ကြိမ် dina ရှုပ်ထွေးတက်ငါသောက်အနည်းငယ်အကြာတွင် fuck ဆိုတဲ့ barry ခံစားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းမရှိ? စားစရာဘို့အတူတူပါပဲ။ စင်ကြယ်ကိုစား sugary Shit ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း, အဟောင်းကိုမြင့်မားသောပြင်းထန်မှုလေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်အတွင်းပစ်။
အခုတော့သင်က porn အရှုံးမပေးအခါ, အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုအပေါ်တစ်ဦးဦးခေါင်းတက်။
1: ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်နှင့်တတိယအပတ်တွင်အဆိုးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ယခင်အဘို့, မတရားသောနှင့်စိတ်အပြောင်းအလဲများမျှော်လင့်ထား။ အဆုံးစွန်သောသူများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၊ လိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုနှင့်နံနက်သစ်သားများသည်စံသတ်မှတ်ထားသော“ Flatline ကာလ” ဟုခေါ်သည်။ သင်ကအလုပ်လုပ်နေတုန်းလားကြည့်ဖို့သွေးဆောင်ခံရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကိုမ ၀ ယ်ပါနဲ့။ နောက်ဆုံးမှာတော့သင်ဖြတ်သန်းသွားမှာပါ၊ နေဟာမိုးတိမ်တွေကိုဖြတ်ပြီး ၁၀ လက်မ Jimmy ကိုslရာမခွေးကြီးနဲ့ကိုက်ဖြတ်နေတယ်။
2: အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ငါကပိုသကြား, junk အစားအသောက်စွဲလမ်းစတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုကိုသို့မပေးပါဘူး။
3: သင်များမှာအဆိုပါအငယ်, ကြာကြာကြောင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုပြန်ခဲ့ဘယ်မှာမှ rewired ရ, reboot ရန်သင့်အားကြာပါသည်။ ငါတို့ပြောနေတာကဒီအချိန်ဟာ? သုံးလမှငါးလခန့်ကြာသည်။ တော်တော်များများလိုသလိုပဲ၊ ဒါပေမယ့်သင်ကကျော်သွားရင်သုံးပတ်လောက်အိပ်ရာပေါ်မှာကပ်ထားမယ်ဆိုရင်၊ (က) လှည့်စားတာကိုသင်ဘယ်လောက်နည်းတယ်၊ (ခ) အမျိုးသမီးတွေနောက်မှာဘယ်လောက်များများလုပ်မှာလဲ။ နှင့် (ဂ) မည်မျှလွယ်ကူသွားသည်။
မင်းဒါတွေအားလုံးထက်ပိုကောင်းတယ် ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ပါ၊ မိန်းမများနှင့်သင်၏အခွင့်အရေးများတိုးပွားပါ၊ ကံကောင်းပါစေ။